Ajaaniib Dooneysay in ay ku biiraan Xarakada Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay « AYAAMO TV
Ajaaniib Dooneysay in ay ku biiraan Xarakada Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay by Maamule b 1 of 1
893 Views Date March 11th, 2014 time 12:32 pm
Ciidamada Booliiska Dalka Faransiiska ayaa gudaha Wadankaasi ku qabtay Rag ajaaniib ah oo doonaysay in ay ku biiraan Xarakada Al-Shabaab ee dagaalada kawada gudaha Soomaaliya .
Magaalada Paris ee Caasimada Dalka Faransiiska ayaa lagu qabtay ilaa 4-nin oo dooayay inay usoo duulaan Dalka Soomaaliya si ay uga bar bar dagaalamaan Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab.
Booliiska Faransiiska war kasoo baxay ayaa lagu sheegay in afartan nin ee la qabtay ay doonayeen in ay u safraan Dalalka Soomaaliya iyo Siiriya si ay ugu biiraan Dagaalyahanada Hubeesan ee ka dagalaama Dalalkaasi.
Ragan loo heesto in ay doonayeen in ay ku biiraan Kooxo loo aqoonsado Argagaxiso ayaa kasoo kala jeeda Wadamada Faransiiska , Mali , Masar iyo Dalka Pakistaan , waxaana hogaamiye u ah nin magaciisa lagu sheegay ibraahim Watara.
Dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ay marin u noqotay dad badan oo jihaad doon ah oo ka yimaada Wadamo kuyaala Qaarada Yurub kuwaa oo doonaya in ay ku biiraan Kooxaha ka dagaalama Dalalka Soomaaliya iyo Siiriya.